1. Kedu ihe ọ bụ? Ebughi n'obi ibia Na-abịa ogologo oge tupu ị gbakee Ikekwe ruo n’ókè nke iwe, iwe, enweghị ike ime ihe ọ bụla. Otutu ndi mmadu nwere ike ihu nsogbu nke nsogbu. Nke ahụ na-abịa oge ụfọdụ nke na-ekwesịghị ịdị ka Innọ n'ọmụmụ ihe Ma ọ bụ na-atụle ihe omume ndị dị mkpa Ma ọ bụ bụ na ihe omume na Kaiwa ga-amụ Ichebara ya echiche, ọ na-akụda mmụọ, na-amakụ obi gị n'iwe. Ma atụla egwu Taa anyi amatala otu esi ewepu hiccups. Na anyị gbakọtara ịgwa gị ka ị zere nchegbu Mgbe ihe mgbaàmà a laghachiri
2. Mara ihe kpatara nsogbu mgbochi tupu ị mata otu ị ga-esi tufuo nsogbu gị. A ga-enwerịrị ihe kpatara ya. Onye ọ bụla na-eme ihe nwere ike ilekọta ma gbochie mgbaàmà a na-akpasu iwe? N'ihi nkwekọrịta Nsonaazụ na iku ume ngwa ngwa Mana n'otu oge ahụ, ikuku na-abata na-ejide ụda olu nke na-emechi na mberede. Site na mkpụmkpụ nke akwara laryngeal Na-eme ka a mgbochiume ụda na-eme ka anyị nwee nkụda mmụọ Ọ nwere ike ịpụta obere oge wee laa, ma ọ bụ oge ụfọdụ ọ ga-ewe ihe karịrị awa 48. Isi mmalite ya nwere ike ị fromụ sịga. Drinking drinkingụbiga mmanya ókè Rie nri ngwa ngwa, egbula ya nke ọma ma ọ bụ rie oseose, flatulence. Enwere ike ibute ya site na ọnọdụ mkpasu iwe ma ọ bụ mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ na-eme ka ahụ nwee ike ịhazigharị na mberede.
3. Wayszọ 5 iji tufuo hiccups Na anaghị emetụta ahụ Maka onye ọbụla hicicups mgbe Taa anyị na-ahụ a mma na mfe ụzọ. Karịsịa, ọ dịghị emetụta ahụ ịhapụ ibe ya.
4. Were oke mmiri oyi ma obu jiri mmiri oyi kpoo onu. Nke a ga - enyere gị aka iku ume karịa site na ị drinkingụ nnukwu iko mmiri jụrụ oyi, mmiri a ga - enyekwa aka mọzụlụ ndị na - egbochi iku ume gị imeghe ma zuru ike, mana jiri nwayọ drinkụọ ma jigide ume gị mgbe ị zuru ike. Abalị na-eme n'abalị iji zere ịkpagbu.
5. Jide iku ume gị maka oge dị mkpirikpi site n'ịgụ iri ji nwayọ. slowly Nke a yiri usoro nke mbụ. Mgbe ijide ume gị Anyị ga-enwe ike iku ume nke ọma. Nwere ike inyere kwụsị mgbaàmà nke abalị.
6. Riekwuo nri na-atọ ụtọ, nke na-atọ ụtọ dị ka iberibe lemon ma ọ bụ ngọngọ shuga. Nke a bụ ụzọ ọzọ iji nyere uche gị aka ịmụrụ anya. Site na uto nke nri N’emeghị ihe ọ bụla
7. Kpọọ otu enyi gị ka o mee gị obi ọjọọ Mgbe ihe na-awụ akpata oyi n’ahụ, ahụ na -eku ume ngwa ngwa. Mkpụrụ ahụ na-agbatịkwa ngwa ngwa
8. Izu ume ma ọ bụ kpatara mgbaàmà nke iku ume Nke a na-enye anyị ohere ikuru ume na iku mmiri na-eme ka akwara diaphragm na akwara ikuku na-emega ahụ.
9. Ọ bụrụ na usoro ndị a kpọtụrụ aha n’elu ka efu efu Na-aga n'ihu mgbochiume n'ihi na ihe karịrị 48 awa, ga-ịhụ dọkịta maka ọgwụ na ọgwụgwọ na-ahụ na-akpata Dịka m kwuru, mgbaàmà ọ bụla sitere na ya. Na mgbochiume n'ihi na ogologo, dị ka ahụ, na-eziga ụfọdụ ịdọ aka ná ntị ihe ịrịba ama na anyị kwesịrị ijide n'aka na-elele na-na mma n'akụkụ.